Madaxweyne ku xigeenka CHP Kooxda Çorlu soo jeedinta masiibada tareenka | RayHaber | raillynews
HometareenkaNidaamka Isgaadhsiinta ee IntercityGudoomiye Ku Xigeenka Kooxda CHP Chorlu Tababarka Musiibada
20 / 07 / 2018 Nidaamka Isgaadhsiinta ee Intercity, tareenka, GUUD, Headline, TURKEY
Madaxweyne kuxigeenka CHP Group Ozgur Ozel, Engin Altay iyo Engin Ozkoc, citizenorlu 24 muwaadin ayaa ku dhintey shilka tareenka si loo baaro dayaca iyo in la go'aamiyo dadka mas'uulka ka ah waxay u soo gudbiyeen baarlamaanka baarlamanka soo jeedin baaritaan.
Hogaamiyaha CHP Kemal Kılıçdaroğlu ayaa ku dhawaaqay Çorlu iyo waftiga CHP oo uu hogaaminayo gudoomiye kuxigeenka Faik Öztrak, iyada oo la raacayo warbixin ay diyaariyeen gudoomiya koox koox, Khaas, Altay iyo Özkoç saxiixa baarlamaankana loosoo bandhigay soo jeedin cilmi baaris. Soo jeedinta cilmi baarista, “8 Bishii Luulyo 2018, shil tareen ayaa ka dhacay degmada Çorlu ee Tekirdağ halkaas oo muwaadin 24 uu naftiisa ku waayey muwaadinka 318na wuu dhaawacmay. Uzunköprü, oo ah waddo tareenno badan aan lagu sameyn karin sababaha ay ka mid yihiin dib u cusboonaysiinta wadada ayaa muddo dheer ka shaqeysa magaalada Thrace,Halkalı Duullimaadyada ayaa sidoo kale lagu yaqaanaa inay ka bilowdaan 1 May 2018. ” Soojeedinta ayaa soo duubtay waxyaabaha soo socda:
GİRİŞ WAA KU SAABSAN BADBAADADA DHAQANKA GİRİŞ
Ada shilka, gaariga ugu horreeya wuu burburiyey laakiin ma uusan dirin, waxaa raacay wadiiqadii 5 ee gartay. Xawaaraha tareenka ee waqtiga shilka waxaa loo go'aamiyay sida 90-110 km. Qiyaastii 8 daqiiqadood ka hor shilka, shaqaalaha tareenka waxay galeen nidaamyada macluumaadka mobilada iyagoo wata weedha 'waxaa jira rakaab ka badan tirada goobaha'. Bayaankii ugu horeeyey ee ay soo saartay Wasaaradda Gaadiidka, Arimaha Badda iyo Isgaarsiinta shilka kadib, waxaa lagu cadeeyay 'shilka waxa uu ku dhacay qulqulka ciidda u dhexeysa wadada iyo wadada tareenka roob da' awgeed.
AQOONSAN WAA FARSAMO BADAN
Warbixinta, oo ay diyaarisay kooxdeena ka dib wareysiyo lala yeeshay khubaro iyo ururro aan dowli ahayn, ayaa dhigaya in qandaraaska dayactirka khariidadaha khadka la mariyay dib u dhac ku yimid qoondaynta gunnooyinka, ma ahan oo keliya halka uu shilku ka dhacay, laakiin sidoo kale qoddobada kale ee khadka ku jira. Qiimaynta ay sameeyeen khubaradu, aragtida ah in shaqooyinka lagu qabto caqliga macaash badan iyo halista aan la xakamayn ee tareenka ayaa noqotay mid qatar badan. Ka sokow indho-sarcaadka sayniska injineernimada ee wejiyada dhismaha iyo dayactirka ee wadooyinka tareenka, kormeer la'aan ayaa sidoo kale u muuqata dhibaato weyn. Waxaa la sheegay in ay horey u maamuli jireen waardiyayaal wadooyinka oo xitaa ay xakameyn jireen gaari xamuul oo elektiroonig ah, laakiin tani waxay ahayd mid xadidan.
FARSAMADA METEOROLOGYADA WAXYAABAHA LAGU AQOONSADO DIGNIIN MUHIIM AH
In kasta oo la sheegay in sababta kaliya ee shilku u ahayd roob xad-dhaaf ah, TMMOB Rugta Injineeriyada Saadaasha Hawada waxay sheegtey inay suurtagal tahay in la arko roobka oo ka dhaca gobolka hal mar sanadkii marka loo eego falanqaynta roobka ee ku celiska Saldhigga Saadaasha Hawada ee Çorlu, oo ah mid ka mid ah saldhigyada cabbirka ugu dhaw goobta shilalka. Saadaasha hawada ayaa sidoo kale sameeya digniinta lagama maarmaanka ah. 7 xaq uma leh inay matalaan xaddiga roobka oo dhaca sanad walbo masiibo dabiici ah oo sababi shil. Way iska cadahay in hay'ad bixisa adeegyada gaadiidka aadanaha ay tahay inay bixiso dhismaha, dayactirka iyo kormeerka khadka iyadoo la tixgalinayo dhammaan macluumaadka sida xaaladaha dhulka, astaamaha juquraafiyeed iyo xaaladaha cimilada. Waxaa jira su'aalo badan oo laga jawaabayo oo ku saabsan shilka. Haddii dariiqyada, dariiqa iyo sahaminta khadka gaaban ee khadka tareenka ee shilku dhacay, in shirkada qandaraaslaha ama aqoonsiga shirkada iyo dukumiintiyada khibradeed ee shaqada ay ku filan yihiin, in ay jiraan baaritaano ku filan inta aysan shilalka sugin jawaabahooda. Waxaa la fahamsan yahay in shilkan tareenka, oo ah halka muwaadiniinteena 7 ay naftooda ku waayeen Çorlu, ay ka dhalatay dayacaad daran iyo xakameyn la'aan. Waxaan soo jeedinaynaa oo soo jeedinaynaa dhismaha guddiga baarista ee baarlamanka iyadoo la raacayo qodobbada 24 iyo 98 ee dastuurka dastuurka si loo helo jawaabaha su'aalaha aan laga jawaabin, in la garto kuwa mas'uulka ka ah iyo in la go'aamiyo tallaabooyinka la qaadayo si looga hortago shilalkaas tareenka mar kale. "
Qareenka CHP's 20-ku soo jeedinta Shilalka Tareen "Waan Ogaa Sababta Sababta"
Ilaaha Qaadirka ah, Çerkezköy-Capakli-Uzunköprü ayaa soo jeediyay qorshe ku saabsan adeegga tareenada
Rugta injineernimada Meteorological